Articles Bible Study | Calvary Burmese Church
Category Archives: Articles Bible Study
သမ္မာကျမ်းစာအုပ်တွင် ယောရှု ၏ နာမည်ကို ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၇း၉ တွင် ပထမ ဆုံးအနေနှင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဟေဗြဲ ဘာသာစကား အရ ယောရှု ဟူသော နာမည်၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်မှာ “ကိုယ်တော် သည် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည် (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဂျူးလူမျိုးများအတွက် … Continue reading →
သူ့ အသက်တာ၏ အထင်ရှားဆုံး ညတွင် လူသားစား ခြသေ့င်္ များနှင့် အတူ ပိတ်လှောင် ထားခြင်းခံရသော သူဖြစ်သည်။ ထိုည သူ၏ အသက် သည် (၈၀) ၀န်းကျင်ခန့်ရှိမည် ဟု ခန့်မှန်းရပြီး၊
ယာကုပ် ၏နာမည်ကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၅း၂၆ တွင် ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဂျူးလူမျိုး နှင့် နိုင်ငံသည် ယာကုပ်၏ သား ၁၂ ယောက်မှ စတင် သန္တေတည် ဖြစ်ထွန်း သောနိုင်ငံ၊ လူမျိုးဖြစ်သည်။ စစ်စစ် သူသည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။
By Rev. Dr. Simon Pau Khan En (ဂ) တစ်ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ ကမူ ဤကဲ့သို့ အတင်း စေခိုင်း ခြင်းမှာ သူ လောကသို့ အမြန် ဆင်းကြွ လာမည်ဟုယူဆပြီး၊
၃။ တောင်ပေါ်တရားတော်၌ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ ၁။ ကျင့်ကြံရမည့်နည်းလမ်းများဖော်ပြခြင်း ဘုရားသခင် သည် လူကို ဖန်ဆင်း သောအခါ ပုံသဏ္ဍာန် တော်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်း ထားပါသည်။
၁။ ခြုံငုံလေ့လာခြင်း။ ၆၆ အုပ်ရှိသော “သမ္မာကျမ်းစာ” အားလုံး၏ အခြေခံ ပင်ရင်းသည် သခင်ယေရှု သာလျှင်ဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ် ကမ္ဘာနှင့် ယှဉ်မည်ဆိုလျှင် နယူးယောက်မြို့တော် ကဲ့သို့စီးပွါးရေး အရ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး စည်ပင်ကာ ယဉ်ကျေး မှုပေါင်းစုံ ထွန်းကားရာ အရပ်တွင် မွေးဖွါးပြီး၊ တောမြက်ရိုင်းများ ထူထဲစွာ ပေါက်သည့်
ဘုရားသခင်ရှိပါသလား၊ ဤငြင်းခုံမူသည် အာရုံစူးစိုက်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
က။ အခြေပြုမှတ်တမ်းတင်သည့်အချက် (The Statement of Doctrine) ဘုရားသခင် သည် တစ်ဆူတည်း ဖြစ်သော်ငြား လည်း ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် တည်းဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးအနေဖြင့် ထင်ရှားဖော်ပြ နေပါသည်။
သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည်မည်သူ နည်း။ “ဘုရားသခင် တည်ရှိသလား” ဟူသော မေးခွန်းနှင့် မတူပေ။
Myanmar Christian Literature Group မှ ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေသော “ဓမ္မသစ်ကျမ်း – မိတ်ဆက်ခြင်း” စာအုပ်မှ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို တင်ပြထားပါသည်။
NT Introduction Lukehttp://www.scribd.com/embeds/51271776/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-6lijoxbkcavtkco3xxd
လူများတို့မြင်စေခြင်း ငှါ ကိုယ်သီလ အကျင့်ကို သူ့ရှေ့မှောက်၌ မကျင့်မည် အကြောင်း သတိပြုကြလော့။
Bill Flick ဆိုသူ သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးက လူတွေဆီမှာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပျက် တတ်တယ်လို့ Pantagraph သတင်းမှာ ရေးသားပါတယ်။
မောရှေ၏ ပညတ်၌ “မိတ်ဆွေ များကိုချစ်ပြီး၊ ရန်သူ များကို မုန်းပါ ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှုကမူ သင်၏ရန်သူကိုတို့ကို ချစ်ကြလော့” ဟုဆိုသည်
၂။ တရားစွဲဆိုခြင်း(မဿဲ ၅း၄၀) သင့်အင်္ကျီကိုယူလို၍ တရားတွေ့သောသူအား သင့်ဝတ်လုံကိုလည်း ယူစေခြင်းငှာအခွင့်ပေးဦးလော့။ ဤကျမ်းစာကို အတိအကျလိုက်နာပါက လူသားများသည် အ၀တ်အစားမပါပဲနေဖို့ရန်သာ ရှိပါသည်။
သူ့မျက်စိ ကိုဖျက်လျှင် ကိုယ်မျက်စိ ဖျက်ခြင်းကို ခံစေ။ သူ့သွား ကိုချိုးလျှင် ကိုယ်သွား ချိုးခြင်းကိုခံစေ ဟူသောပညတ်စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။
Myanmar Christian Literature group မှ ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေသော ဓမ္မသစ် ကျမ်းမိတ်ဆက်ခြင်း စာအုပ်မှ ရှင်မာကု ရစ်ဝင်ကျမ်း ကိုထပ်ဆင့် တင်ပြပါသည်။
Christian Literature Centre (CLC) မှ ထုတ်ဝေသော အသင်းတော် သမိုင်းစာအုပ်မှ အခန်း (၅) (ပေါလုနှင့်ရောမ လက်အောက်ခံ ရှိအသင်းတော်များ) ကို ထပ်ဆင့် တင်ပြထားပါသည်။
Myanmar Christian Literature group မှဘာသာပြန် ထုတ်ဝေသော ဓမ္မသစ် ကျမ်းမိတ်ဆက်ခြင်း စာအုပ်မှ ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်း ကိုထပ်ဆင့် တင်ပြပါသည်။
အသင်းတော်သမိုင်း စာအုပ်မှ ပထမ ဦးဆုံးသော အသင်းတော်မှ ယုံကြည်သူ အသင်းသားများ အကြောင်း ကိုထပ်ဆင့်တင်ပြပါသည်။
Rev. Dr. Simon Pau Khan En ရေးသားပြီး Myanmar Baptist Convention မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော တောင်ပေါ်တရားတော် (Sermon on the Mountain)